Yintoni iNyaniso ethandwayo? Imbali yeTe kunye neMizekelo yeNene-yeHlabathi ye-AR
NgeCawa, uJuni 3, 2018 NgoMgqibelo, nge-13 kaFebruwari ngo-2021 Douglas Karr
Ukusuka kwimbono yomthengisi, ndiyakholelwa ukuba ubunyani obungathandabuzekiyo bunokubanamandla kunokuba kunjalo ngokwenyani. Ngelixa inyani yokwenyani isivumela ukuba sibe namava angengawo awokwenyani, inyani eqinisekisiweyo iya konyusa kwaye inxibelelane nehlabathi esihlala kulo ngoku. Sabelane ngaphambili njani I-AR inokuchaphazela ukuthengisa, kodwa andikholwa ukuba sichaze ngokupheleleyo ubunyani obungathandabuzekiyo kwaye sanika imizekelo.
Isitshixo esinokubakho kwintengiso kukuqhubela phambili kwetekhnoloji ye-smartphone. Ngobubanzi bebhendi obuninzi, isantya sekhompyuter esisebenza ngokuchaseneyo iidesktops kwiminyaka embalwa edlulileyo, kunye neninzi yememori- izixhobo ze-smartphone zivula iingcango zokwamkelwa kwenyani kunye nophuhliso. Ngapha koko, ukuphela kuka-2017, ama-30% abasebenzisi be-smartphone basebenzise usetyenziso lwe-AR… ngaphezulu kwe-60 yezigidi zabasebenzisi e-US kuphela
Yintoni iNyaniso ethandwayo?
I-AR isetyenziselwa njani ukuThengisa kunye nokuThengisa?
Ngokwengxelo yakutshanje eyenziwe ngu-Elmwood, ubuchwephesha bokulinganisa njengeVR kunye neAR busetelwe ukubonelela ngexabiso kwangoko ikakhulu kwintengiso kunye neempawu zabathengi kwiindawo ezimbini eziphambili. Okokuqala, baya kongeza ixabiso apho baphucula amava abathengi ngayo imveliso uqobo. Umzekelo, ngokwenza ulwazi oluntsonkothileyo lwemveliso kunye neminye imixholo ebalulekileyo ibandakanyeke ngakumbi kulwakhiwo lomdlalo, ukubonelela ngoqeqesho ngamanyathelo ngamanyathelo, okanye ukunika izikhombisi zokuziphatha, kwimeko yokubambelela kunyango.
Okwesibini, obu buchwephesha buza kuthatha apho bunokunceda iimveliso zazise kwaye ziguqule indlela abantu abalubona ngayo uphawu ngokuvelisa izityebi, amava okusebenzisana kunye namabali anyanzelekileyo ngaphambi kokuthenga. Oku kunokubandakanya ukwenza ukupakisha ijelo elitsha lokuzibandakanya, ukuvala umsantsa phakathi kwe-Intanethi kunye nokuthenga ngokwasemzimbeni, kunye nokuzisa intengiso yesiko ebomini ngamabali anamandla eempawu.
Imizekelo yokuSebenza kweNene okwandisiweyo kweNtengiso kunye noThengiso
Enye inkokeli yi-IKEA. I-IKEA ine-app yokuthenga ekuvumela ukuba uhambe ngokulula kwibali labo kwaye ufumane iimveliso ozichongileyo ngelixa ukhangela ekhaya. Kunye Indawo ye-IKEA ye-iOS okanye i-Android, usetyenziso lwabo oluvumela abasebenzisi phantse "babeke" iimveliso ze-IKEA kwindawo yakho.
IAmazon ilandele umzekelo nge Umbono we-AR ye-iOS.
Omnye umzekelo kwintengiso yindawo yeYelp yabo usetyenziso lweselula kubizwa uMonocle. Ukuba ukhuphele usetyenziso kwaye uvule imenyu engakumbi, uya kufumana ukhetho olubizwa ngokuba Imonocle. I-Monocle evulekileyo kunye ne-Yelp ziya kusebenzisa indawo okuyo, indawo ekubekwe kuyo ifowuni, kunye nekhamera yakho ukogquma idatha ngokubonakalayo ngombono wekhamera. Ipholile ngokwenene- ndiyamangaliswa kukuba abathethi ngayo rhoqo.
Iithiyetha ze-AMC zibonelela sicelo se sithuthi evumela ukuba ukhombe kwiposta kwaye ubukele umboniso bhanyabhanya.
Indlela yendlela usungule izibuko ezisebenzisanayo kwiivenkile ezithengisa apho umsebenzisi anokujonga khona ukuba bajongeka njani ngezithambiso, iinwele, okanye ulusu olufakelweyo. Sephora ikhuphe iteknoloji yabo ngesicelo esiselfowuni.
Iinkampani zinokuphumeza ezazo iinkqubo zokwenyani ezongeziweyo zisebenzisa I-ARKit yeApple, I-ARCore kaGoogle, okanye IiHololens zeMicrosoft. Iinkampani zentengiso nazo zinokusebenzisa ithuba I-SDK yolongezo.
Ukwanda kwenyani: Kwixesha elidlulileyo, langoku, nakwixesha elizayo
Nalu uphononongo olukhulu kwi-infographic, Yintoni iNyaniso eNdisiweyo, yenziwe ngu IiVexels.
tags: arkwimarikeNyaniso eyongeziweyoinkcazo eyinyani yenyanielizayo okanye arimbali ka-arikhathalogu yeikeaikhathalogu yeikeaii-vexelsyintoni aryintoni eyinyani eyongeziweyoapp yeselfmonple yelp
Izibonelelo ezi-4 ze-Micro-Influencers